ဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာအသင်းကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အားပေးကြရအောင်လား
ဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှုရဖို့ ကြိုးပမ်းရမယ့် မြန်မာအသင်း
12 Nov 2018 . 3:35 PM
၂၀၁၈ ဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်ကတည်းက စတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အရင်လို အိမ်ရှင်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းက လက်ခံကျင်းပတာ မဟုတ်ဘဲ အာဆီယံဒေသတွင်း (၉)နိုင်ငံက ကွင်း(၁၃)ကွင်းမှာ ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အရင်ပြိုင်ပွဲတွေတုန်းက အိမ်ရှင်အသင်းပွဲစဉ် မဟုတ်ရင် ပရိသတ်ကြည့်ရှုမှု နည်းပါးတာတွေ မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက် အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (AFF)က အခုလို ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေဟာ ကိုယ့်အိမ်ကွင်းမှာ (၂)ပွဲစီ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး အုပ်စုတစ်ခုကို (၅)သင်းစီပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲစဉ်းမျဉ်းကတော့ အာဆီယံ ဒေသတွင်း အဆင့်ရပ်တည်မှုမှာ (၁)ကနေ (၉)အထိ အသင်းတွေက တိုက်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်မှာဖြစ်ပြီး အဆင့်(၁၀)နဲ့ (၁၁)အသင်းတွေက ခြေစစ်ပွဲနှစ်ကျော့ကစားပြီးမှ အုပ်စုအဆင့်ကို တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီမီးဖိုင်နယ်နဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေကို ထုံးစံအတိုင်း နှစ်ကျော့စီကစားသွားမှာပါ။
ဒီပြိုင်ပွဲဟာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး (၂)နှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲ စတင်တုန်းက Tiger ကုမ္ပဏီက စပွန်ဆာပေးခဲ့တဲ့အတွက် Tiger Cup ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ စပွန်ဆာမရှိလို့ AFF Championship အမည်နဲ့ ကျင်းပခဲ့တယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာတော့ နာမည်ကြီး ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ဆူဇူကီးက စပွန်ဆာပေးခဲ့တာ အခုအချိန်အထိပါပဲ။ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် အကြိမ်အများဆုံး ဗိုလ်စွဲခဲ့တာက ထိုင်းအသင်းဖြစ်ပြီး (၅)ကြိမ်ဗိုလ်စွဲခဲ့သလို သူ့နောက်မှာ စင်ကာပူက (၄)ကြိမ်၊ မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်တို့က (၁)ကြိမ်စီဗိုလ်စွဲခဲ့တယ်။
တစ်ချိန်က အရှေ့တောင်အာရှမှာသာမက အာရှဘောလုံးစင်မြင့်ထက်မှာ ထည်ထည်ဝါ၀ါ ရပ်တည်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာအသင်းဟာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ကြီးကြီးမားမား အောင်မြင်မှု မရခဲ့ဖူးဘဲ အမြင်ဆုံးရပ်တည်မှုက ၂၀၀၄ မှာ စတုတ္ထ၊ ၂၀၁၆ မှာ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့် တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်း ကစလို့ ခြေစွမ်းရော၊ အောင်မြင်မှုပါ ကျဆင်းလာတဲ့ မြန်မာအသင်းဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ဂျာမန်လူမျိုးနည်းပြ အန်တိုနီဟေး Antoine Hey ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိဖို့ ပြင်ဆင်နေပါပြီ။
သက်တမ်းအလိုက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အောင်မြင်မှု ရခဲ့ပေမယ့် လက်ရွေးစင်အဆင့်မှာတော့ ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်တဲ့ မြန်မာအသင်းဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက် အခုပြိုင်ပွဲမှာ ထိုက်သင့်တဲ့ အောင်မြင်မှု ရယူနိုင်ဖို့ လိုနေတယ်လို့ ပြောရမယ်။ မြန်မာအသင်းဟာ အုပ်စု(က)မှာ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုတို့နဲ့ ဆုံတွေ့နေပြီး ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်တို့ကို အိမ်ကွင်း၊ လာအို၊ မလေးရှားတို့ကို အဝေးကွင်း ကစားရမှာပါ။
အခုလောလောဆယ် ဗီယက်နမ်နဲ့ မလေးရှားတို့က (၃)မှတ်စီ ရယူခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ ဒီနေ့ကစားမယ့် ကမ္ဘောဒီးယားကို မဖြစ်မနေ အနိုင်ကစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအသင်းဟာ အင်ဒို၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်တို့ရဲ့ အုပ်စု(ခ)ထက်စာရင် အုပ်စုချောင်တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်လို့ အမှတ်ရနိုင်တဲ့ပွဲတွေမှာ မဖြစ်မနေ အမှတ်ပြည့်ရဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ မြန်မာအသင်းအတွက် အုပ်စုတက်ရေးအဆုံးအဖြတ်ဖြစ်လာနိုင်တာက ဗီယက်နမ်နဲ့ ကစားမယ့် အိမ်ကွင်းပွဲနဲ့၊ မလေးရှားနဲ့ အဝေးကွင်းကစားရမယ့် အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒီနှစ်ပွဲမှာ အခြေအနေကောင်းခဲ့ရင် အုပ်စုကတက်ဖို့ မျှော်လင့်ခွင့်ရှိမှာပါ။
လက်ရှိ မြန်မာအသင်းရဲ့ လူစာရင်းအပေါ် ပရိသတ်တွေက အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေကြပေမယ့်လည်း ပြိုင်ပွဲစရင်တော့ ကိုယ့်နိုင်ငံအသင်းကို အင်တိုက်အားတိုက် အားပေးကြဦးမှာပါပဲ။ ပရိသတ်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို မြန်မာအသင်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလား၊ အရင်နှစ်တွေကလိုပဲ စိတ်ပျက်စရာ ရလဒ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဦးမလားဆိုတာတော့ . . .
Photo:YouTube,AFF Suzuki Cup,FOX Sports Asia,Asia News Network
ဆူဇူကီးဖလားပွိုငျပှဲမှာ အောငျမွငျမှုရဖို့ ကွိုးပမျးရမယျ့ မွနျမာအသငျး
၂၀၁၈ ဆူဇူကီးဖလားပွိုငျပှဲကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ နိုဝငျဘာလ (၈)ရကျကတညျးက စတငျကငျြးပနပွေီဖွဈပါတယျ။ ဒီနှဈပွိုငျပှဲရဲ့ ထူးခွားခကျြကတော့ အရငျလို အိမျရှငျနိုငျငံတဈခုတညျးက လကျခံကငျြးပတာ မဟုတျဘဲ အာဆီယံဒသေတှငျး (၉)နိုငျငံက ကှငျး(၁၃)ကှငျးမှာ ကငျြးပနတောဖွဈပါတယျ။ ရညျရှယျခကျြကတော့ အရငျပွိုငျပှဲတှတေုနျးက အိမျရှငျအသငျးပှဲစဉျ မဟုတျရငျ ပရိသတျကွညျ့ရှုမှု နညျးပါးတာတှေ မဖွဈစခေငျြတဲ့အတှကျ အာဆီယံဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ (AFF)က အခုလို ပွငျဆငျခဲ့တာပါ။ ပွိုငျပှဲဝငျအသငျးတှဟော ကိုယျ့အိမျကှငျးမှာ (၂)ပှဲစီ ကစားရမှာဖွဈပွီး အုပျစုတဈခုကို (၅)သငျးစီပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။
ပွိုငျပှဲစဉျးမဉျြးကတော့ အာဆီယံ ဒသေတှငျး အဆငျ့ရပျတညျမှုမှာ (၁)ကနေ (၉)အထိ အသငျးတှကေ တိုကျရိုကျခွစေဈပှဲ အောငျမွငျမှာဖွဈပွီး အဆငျ့(၁၀)နဲ့ (၁၁)အသငျးတှကေ ခွစေဈပှဲနှဈကြော့ကစားပွီးမှ အုပျစုအဆငျ့ကို တကျရောကျမှာဖွဈပါတယျ။ ဆီမီးဖိုငျနယျနဲ့ ဗိုလျလုပှဲတှကေို ထုံးစံအတိုငျး နှဈကြော့စီကစားသှားမှာပါ။
ဒီပွိုငျပှဲဟာ ၁၉၉၆ ခုနှဈက စတငျပျေါပေါကျခဲ့တာဖွဈပွီး (၂)နှဈတဈကွိမျ ကငျြးပတာလညျးဖွဈပါတယျ။ ပွိုငျပှဲ စတငျတုနျးက Tiger ကုမ်ပဏီက စပှနျဆာပေးခဲ့တဲ့အတှကျ Tiger Cup ဆိုတဲ့အမညျနဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှဈအထိ ကငျြးပခဲ့ပွီး ၂၀၀၇ ခုနှဈမှာ စပှနျဆာမရှိလို့ AFF Championship အမညျနဲ့ ကငျြးပခဲ့တယျ။ ၂၀၀၈ ခုနှဈမှာတော့ နာမညျကွီး ဂပြနျကားကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ ဆူဇူကီးက စပှနျဆာပေးခဲ့တာ အခုအခြိနျအထိပါပဲ။ ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ အကွိမျအမြားဆုံး ဗိုလျစှဲခဲ့တာက ထိုငျးအသငျးဖွဈပွီး (၅)ကွိမျဗိုလျစှဲခဲ့သလို သူ့နောကျမှာ စငျကာပူက (၄)ကွိမျ၊ မလေးရှား၊ ဗီယကျနမျတို့က (၁)ကွိမျစီဗိုလျစှဲခဲ့တယျ။
တဈခြိနျက အရှတေ့ောငျအာရှမှာသာမက အာရှဘောလုံးစငျမွငျ့ထကျမှာ ထညျထညျဝါဝါ ရပျတညျခဲ့ဖူးတဲ့ မွနျမာအသငျးဟာ ဒီပွိုငျပှဲမှာ ကွီးကွီးမားမား အောငျမွငျမှု မရခဲ့ဖူးဘဲ အမွငျဆုံးရပျတညျမှုက ၂၀၀၄ မှာ စတုတ်ထ၊ ၂၀၁၆ မှာ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ တကျရောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ၁၉၈၀ နောကျပိုငျး ကစလို့ ခွစှေမျးရော၊ အောငျမွငျမှုပါ ကဆြငျးလာတဲ့ မွနျမာအသငျးဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ ဂြာမနျလူမြိုးနညျးပွ အနျတိုနီဟေး Antoine Hey ရဲ့ ဦးဆောငျမှုနဲ့အတူ အောငျမွငျမှု လမျးကွောငျးပျေါ ရောကျရှိဖို့ ပွငျဆငျနပေါပွီ။
သကျတမျးအလိုကျပွိုငျပှဲတှမှော အောငျမွငျမှု ရခဲ့ပမေယျ့ လကျရှေးစငျအဆငျ့မှာတော့ ရုနျးကနျနရေဆဲဖွဈတဲ့ မွနျမာအသငျးဟာ ပရိသတျတှရေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြကို ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့အတှကျ အခုပွိုငျပှဲမှာ ထိုကျသငျ့တဲ့ အောငျမွငျမှု ရယူနိုငျဖို့ လိုနတေယျလို့ ပွောရမယျ။ မွနျမာအသငျးဟာ အုပျစု(က)မှာ ဗီယကျနမျ၊ မလေးရှား၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ လာအိုတို့နဲ့ ဆုံတှနေ့ပွေီး ကမ်ဘောဒီးယား၊ ဗီယကျနမျတို့ကို အိမျကှငျး၊ လာအို၊ မလေးရှားတို့ကို အဝေးကှငျး ကစားရမှာပါ။
အခုလောလောဆယျ ဗီယကျနမျနဲ့ မလေးရှားတို့က (၃)မှတျစီ ရယူခဲ့ပွီးဖွဈလို့ မွနျမာအသငျးအနနေဲ့ ဒီနကေ့စားမယျ့ ကမ်ဘောဒီးယားကို မဖွဈမနေ အနိုငျကစားရတော့မှာဖွဈပါတယျ။ မွနျမာအသငျးဟာ အငျဒို၊ စငျကာပူ၊ ထိုငျး၊ ဖိလဈပိုငျတို့ရဲ့ အုပျစု(ခ)ထကျစာရငျ အုပျစုခြောငျတယျလို့ ဆိုရမှာဖွဈလို့ အမှတျရနိုငျတဲ့ပှဲတှမှော မဖွဈမနေ အမှတျပွညျ့ရဖို့ လိုအပျနပေါတယျ။ မွနျမာအသငျးအတှကျ အုပျစုတကျရေးအဆုံးအဖွတျဖွဈလာနိုငျတာက ဗီယကျနမျနဲ့ ကစားမယျ့ အိမျကှငျးပှဲနဲ့၊ မလေးရှားနဲ့ အဝေးကှငျးကစားရမယျ့ အုပျစုနောကျဆုံးပှဲတှဖွေဈလာနိုငျတယျ။ ဒီနှဈပှဲမှာ အခွအေနကေောငျးခဲ့ရငျ အုပျစုကတကျဖို့ မြှျောလငျ့ခှငျ့ရှိမှာပါ။
လကျရှိ မွနျမာအသငျးရဲ့ လူစာရငျးအပျေါ ပရိသတျတှကေ အားမလိုအားမရ ဖွဈနကွေပမေယျ့လညျး ပွိုငျပှဲစရငျတော့ ကိုယျ့နိုငျငံအသငျးကို အငျတိုကျအားတိုကျ အားပေးကွဦးမှာပါပဲ။ ပရိသတျတှရေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြကို မွနျမာအသငျး ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမလား၊ အရငျနှဈတှကေလိုပဲ စိတျပကျြစရာ ရလဒျတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရဦးမလားဆိုတာတော့ . . .